( usd billions as of - Engels - Burmees Vertaling en Voorbeelden
Je was op zoek naar: ( usd billions as of january 1 ) (Engels - Burmees)
As of March 19, these three had already recovered.
မတ်လ 19 ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ၎င်းသုံးဦးစလုံးက နေပြန်ကောင်းလာခဲ့ပါသည်။
As of6April 2020, the details had not yet been released.
2020 ပြည့်နှစ် ဧပြီလ6ရက် ဖော်ပြချက်အရ အသေးစိတ်ကို မထုတ်ပြန်ရသေးပါ။
There are more than 300 active clinical trials underway as of April 2020.
ဧပြီလ 2020 အရ လက်ရှိ ဆေးပညာစမ်းသပ်မှုပေါင်း 300 ကျော် ရှိသည်ဟု သိရသည်။
As of March 2020, the WHO recommends the following case definitions:
2020 ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်၊ WHO သည် ဖော်ပြပါ ဖြစ်စဉ်အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်များကို အကြံပြုထားပါသည်-
There is tentative evidence for efficacy by remdesivir, as of March 2020.
2020 ခုနှစ် မတ်လတွင် ရမ်ဒီဆီဗာ၏ ထိရောက်မှု အတွက် အထောက်အထားများ ထွက်ပေါ်ရန် ရည်မှန်းထားသည်။
As of 19 March drive in tests were offered in several large cities.
မတ်လ 19 ရက်နေ့တွင် မြို့ကြီး အများအပြား၌ ယာဉ်မောင်းဝင် စမ်းသပ်မှုများ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံး၌ အချိန်မတော်မတန်ဘွားသော သူကဲ့သို့ဖြစ်သော ငါပင်မြင်ရ၏။
ထိုအရပ်၌ သူတို့သည် ကြောက်လန့်ခြင်းသို့ ရောက်၍ သားဘွားသောမိန်းမ ခံရသကဲ့သို့ ဝေဒနာ ရှိကြ၏။
As of April 2020, there is no specific treatment for COVID-19.
2020 ခုနှစ် ဧပြီလတွင်၊ COVID-19 အတွက် သီးခြားကုသမှု မရှိပါ။
ထိုခဏခြင်းတွင်ကွဲပြားသော လျှာတို့သည်မီးလျှာကဲ့သို့ထင်ရှား၍၊ ထိုသူအသီးသီးတို့အပေါ်၌ တည် နေကြ၏။
ဝါနှင့်သိုးမွေးကို ရောနှော၍ ရက်သောအဝတ် ကို မဝတ်ရ။
Quest Diagnostics similarly made nationwide COVID-19 testing available as of9March 2020.
Quest Diagnostics က 2020 ခုနှစ် မတ်လ9ရက်နေ့တွင် တစ်နိုင်ငံလုံး COVID-19 စမ်းသပ်မှု ရရှိနိုင်အောင် အလားတူ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
As of 14 April 2020, the app was awaiting approval by the Google Play Store and Apple App Store.
2020 ပြည့်နှစ် ဧပြီလ 14 ရက်နေ့မှစ၍ အက်ပလီကေးရှင်းသည် Google Play Store နှင့် Apple App Store တို့၏ အတည်ပြုချက်ကို စောင့်ဆိုင်းနေသည်။
As of 8 April 2020, approximately 1.716 billion learners have been affected due to school closures in response to COVID-19.
2020 ခုနှစ်၊ ဧပြီလ 8 ရက်နေ့အရ ခန့်မှန်းခြေ 1.716 ဘီလီယံအရေအတွက်ရှိ ကျောင်းသူ/ကျောင်းသားများ အနေဖြင့် COVID-19 တုံ့ပြန်မှုအတွင်း ကျောင်းများပိတ်သိမ်းခံရခြင်းဖြင့် အကျိုးသက်ရောက်ရှိလျက်ရှိကြောင်း ဖော်ပြသည်။
As of6April 2020, none of these has been proved sufficiently accurate to be approved for widespread use.
2020 ပြည့်နှစ် ဧပြီလ6ရက်နေ့အထိ ၎င်းတို့ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနိုင်သည်ဟု အတည်ပြုရန် လုံလောက်သော အတိုင်းအတာအထိ မှန်ကန်တိကျမှုရှိကြောင်း သက်သေမပြနိုင်သေးပါ။
အဘယ်အပြစ်မျှမရှိ၊ အညစ်အကြေးနှင့် ကင်းစင်သော သိုးသငယ်ကဲ့သို့သော ခရစ်တော်၏ အသွေး တော်မြတ်နှင့်ရွေးတော်မူသည်ကို သိမှတ်ကြလော့။
As of4April 2020, antibody tests (which may detect active infections and whetheraperson had been infected in the past) were in development, but not yet widely used.
2020 ခုနှစ် ဧပြီလ4ရက်နေ့ ရောက်သောအခါ (လက်ရှိ ကူးစက်ရောဂါ ရှိနေခြင်းနှင့် ယခင်က ကူးစက်ခံထားရသူများကို စမ်းသပ်နိုင်သော) အင်တီဘော်ဒီ စမ်းသပ်မှု ကို ဖော်ထုတ် ခဲ့သော်လည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပါ။
ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှ ဝေမျှလာသော လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အညီ ကျွန်ုပ်တို့၏ DC ရုံးခန်းကို အဝေးမှ အပြည့်အဝ လုပ်ကိုင်နိုင်သော စနစ်သို့ လွန်ခဲ့သောအပတ်အတွင်း ပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။
North Korea claimed, as of Thursday, it was one of the few countries remaining free of coronavirus infections.
ကြာသပတေးနေ့တွင် မြောက်ကိုရီးယားက ၎င်းတို့သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကင်းစင်သော နိုင်ငံအချို့မှ တစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
As of 10 April 2020, approximately 97,000 deaths had been attributed to COVID-19.
2020 ပြည့်နှစ် ဧပြီလ 10 ရက်နေ့အထိ COVID-19 ကြောင့် သေဆုံးသူဦးရေ 97,000 ဝန်းကျင် ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
tum mere bare mein kya jante ho (Hindi>Engels)offertaetempi di consegna (Italiaans>Engels)moral story meaning in telugu (Telugu>Engels)vc quer namorar comigo ? (Portugees>Engels)kekasih minhyun (Maleis>Koreaans)以下非政府组织的观察员 (Chinees (Vereenvoudigd)>Frans)meri bus chhut gai (Hindi>Engels)toi không có nhiều thời gian như vậy (Vietnamees>Engels)facebook (Russisch>Turks)in buon compenso emodinamico (Italiaans>Engels)公斤受到污染的油 (Chinees (Vereenvoudigd)>Engels)сорбированных (Russisch>Engels)zahlungsaufschub (Duits>Maltees)bahut dino ke baad online aaye ho (Hindi>Engels)厕所 (Chinees (Vereenvoudigd)>Japans)linksfraktion (Duits>Italiaans)siwezi kukuacha (Swahili>Engels)keying (Engels>Spaans)limau manis (Maleis>Engels)warm welcome (Engels>Tamil)pasar (Maleis>Chinees (Vereenvoudigd))anushka sen (Indonesisch>Hindi)nanun tangshinul sarang hamnida (Koreaans>Engels)大腿動脈閉塞 (Japans>Engels)lz (Russisch>Duits)